သစ်သားထည်ပုံစံကွန်တိန်နာအဆောက်အအုံပါ ၀ င်သည့်ထုပ်ပိုးထားသောကွန်တိန်နာအဆောင်ကိုကမ္ဘာပေါ်တွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်, အထူးသဖြင့်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံများတွင်, စီးပွားရေးနှင့်အလယ်အလတ်ဒေါသဟိုတယ်များ, ကျောင်းသားတိုက်ခန်း, လူနေတိုက်ခန်းများ, အားလပ်ရက်တိုက်ခန်းများနှင့်အခြားအဆောက်အ ဦး များ. ကွန်တိန်နာအဆောက်အ ဦး နေရာအနှံ့ဖြစ်ပါတယ်. ၎င်း၏မြင့်မားသောထိရောက်မှုနှင့်အတူ, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အခြား ...
နှစ်ခန်းထုတ်လုပ်သူနှင့်အတူ Prefabricated T အိမ်
အခန်းနှစ်ခန်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်အတူ Prefabricated T house ကိုအရိုးစုအတွက်အလင်းသံမဏိကိုယ်ထည်ဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားသောအိမ်များနှင့် prefabricated အိမ်များ၏အစိမ်းရောင်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်အရောင်သံမဏိအသားညှပ်ပေါင်မုန့်ပြား, သော့ခတ်ဆက်သွယ်မှုအားဖြင့်စံကိန်းပကတိတန်ဖိုးအစိတ်အပိုင်းအရသိရသည်ထုတ်ကုန်များ၏ Spatial configuration ကို, စုဝေးနှင့် disassemble ရန်အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်, ကိရိယာများ ...
အလင်းသံမဏိဗီလာအိမ်အလင်းသံမဏိ villa အိမ်, ၎င်းဒြပ်စင်၏အဓိကပစ္စည်းမှာအအေး - စတီးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသံမဏိပြားလေးများကိုအအေး - နည်းပညာဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသောအလင်းသံဖြစ်သည်, တိကျသောတွက်ချက်မှုအပေါင်းထောက်ခံမှုနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများပေါင်းစပ်ပြီးနောက်, တစ် ဦး ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဆောင်သောစွမ်းရည်ကစားရန်, တစ်ချိန်တည်းမှာပင်စက်ရုံ prefabricated အစိတ်အပိုင်းများချမှတ်ရန်, On-site module ...
စံသတ်မှတ်ထားသောဂဟေဆော်သောအိမ်သုံးနို့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကွန်တိန်နာအဆောက်အအုံကိုကမ္ဘာတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့သည်, အထူးသဖြင့်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံများတွင်, စီးပွားရေးနှင့်အလယ်အလတ်ဒေါသဟိုတယ်များ, ကျောင်းသားတိုက်ခန်း, လူနေတိုက်ခန်းများ, အားလပ်ရက်တိုက်ခန်းများနှင့်အခြားအဆောက်အ ဦး များ. ကွန်တိန်နာအဆောက်အ ဦး နေရာအနှံ့ဖြစ်ပါတယ်. ၎င်း၏မြင့်မားသောထိရောက်မှုနှင့်အတူ, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အခြားဝိသေသလက္ခဏာများ,…
ကွန်တိန်နာအတွင်းရှိကော်ဖီဆိုင်ကွန်တိန်နာအဆောက်အအုံကိုကမ္ဘာတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့သည်, အထူးသဖြင့်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံများတွင်, စီးပွားရေးနှင့်အလယ်အလတ်ဒေါသဟိုတယ်များ, ကျောင်းသားတိုက်ခန်း, လူနေတိုက်ခန်းများ, အားလပ်ရက်တိုက်ခန်းများနှင့်အခြားအဆောက်အ ဦး များ. ကွန်တိန်နာအဆောက်အ ဦး နေရာအနှံ့ဖြစ်ပါတယ်. ၎င်း၏မြင့်မားသောထိရောက်မှုနှင့်အတူ, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အခြားဝိသေသလက္ခဏာများ, ဖြစ်လာပြီ ...
အချည်းနှီးထုပ်ပိုးကွန်တိန်နာပေါင်းစပ်ဆောင်အမြန်တပ်ဆင်ခြင်းကွန်တိန်နာအဆောက်အ ဦး ကိုကမ္ဘာပေါ်တွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်, အထူးသဖြင့်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံများတွင်, စီးပွားရေးနှင့်အလယ်အလတ်ဒေါသဟိုတယ်များ, ကျောင်းသားတိုက်ခန်း, လူနေတိုက်ခန်းများ, အားလပ်ရက်တိုက်ခန်းများနှင့်အခြားအဆောက်အ ဦး များ. ကွန်တိန်နာအဆောက်အ ဦး နေရာအနှံ့ဖြစ်ပါတယ်. ၎င်း၏မြင့်မားသောထိရောက်မှုနှင့်အတူ, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အခြားဝိသေသလက္ခဏာများ, အဲဒါ ...
နှင့်အတူပေါ့ပါးသံမဏိဖွဲ့စည်းပုံဂိုဒေါင် 10 တစ်တန်ရိန်းအလုပ်ရုံ
Light steel structure warehouse Container building has been widely used in the world, အထူးသဖြင့်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံများတွင်, စီးပွားရေးနှင့်အလယ်အလတ်ဒေါသဟိုတယ်များ, ကျောင်းသားတိုက်ခန်း, လူနေတိုက်ခန်းများ, အားလပ်ရက်တိုက်ခန်းများနှင့်အခြားအဆောက်အ ဦး များ. ကွန်တိန်နာအဆောက်အ ဦး နေရာအနှံ့ဖြစ်ပါတယ်. ၎င်း၏မြင့်မားသောထိရောက်မှုနှင့်အတူ, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အခြားဝိသေသလက္ခဏာများ, ဖြစ်လာပြီ ...
Low cost storage light steel structure warehouse Container building has been widely used in the world, အထူးသဖြင့်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံများတွင်, စီးပွားရေးနှင့်အလယ်အလတ်ဒေါသဟိုတယ်များ, ကျောင်းသားတိုက်ခန်း, လူနေတိုက်ခန်းများ, အားလပ်ရက်တိုက်ခန်းများနှင့်အခြားအဆောက်အ ဦး များ. ကွန်တိန်နာအဆောက်အ ဦး နေရာအနှံ့ဖြစ်ပါတယ်. ၎င်း၏မြင့်မားသောထိရောက်မှုနှင့်အတူ, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အခြားဝိသေသလက္ခဏာများ, အဲဒါ ...
ဇိမ်ခံထုံးစံအဆင့်မြင့်အိမ်များကွန်တိန်နာအဆောက်အအုံကိုကမ္ဘာတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့သည်, အထူးသဖြင့်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံများတွင်, စီးပွားရေးနှင့်အလယ်အလတ်ဒေါသဟိုတယ်များ, ကျောင်းသားတိုက်ခန်း, လူနေတိုက်ခန်းများ, အားလပ်ရက်တိုက်ခန်းများနှင့်အခြားအဆောက်အ ဦး များ. ကွန်တိန်နာအဆောက်အ ဦး နေရာအနှံ့ဖြစ်ပါတယ်. ၎င်း၏မြင့်မားသောထိရောက်မှုနှင့်အတူ, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အခြားဝိသေသလက္ခဏာများ, အဲဒါဖြစ်လာပြီ
ခေါက်နိုင်သောကွန်တိန်နာအိမ်များကွန်တိန်နာအဆောက်အအုံကိုကမ္ဘာပေါ်တွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်, အထူးသဖြင့်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံများတွင်, စီးပွားရေးနှင့်အလယ်အလတ်ဒေါသဟိုတယ်များ, ကျောင်းသားတိုက်ခန်း, လူနေတိုက်ခန်းများ, အားလပ်ရက်တိုက်ခန်းများနှင့်အခြားအဆောက်အ ဦး များ. ကွန်တိန်နာအဆောက်အ ဦး နေရာအနှံ့ဖြစ်ပါတယ်. ၎င်း၏မြင့်မားသောထိရောက်မှုနှင့်အတူ, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အခြားဝိသေသလက္ခဏာများ, ဒါကြောင့်အနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်လာသည်
ခေတ်မီကွန်တိန်နာရုံးကွန်တိန်နာအဆောက်အအုံကိုကမ္ဘာပေါ်တွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်, အထူးသဖြင့်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံများတွင်, စီးပွားရေးနှင့်အလယ်အလတ်ဒေါသဟိုတယ်များ, ကျောင်းသားတိုက်ခန်း, လူနေတိုက်ခန်းများ, အားလပ်ရက်တိုက်ခန်းများနှင့်အခြားအဆောက်အ ဦး များ. ကွန်တိန်နာအဆောက်အ ဦး နေရာအနှံ့ဖြစ်ပါတယ်. ၎င်း၏မြင့်မားသောထိရောက်မှုနှင့်အတူ, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အခြားဝိသေသလက္ခဏာများ, ဒါကြောင့်အနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်လာသည်